Sida laga soo xigtay Macron, Notre-Dame ayaa dib loo dhisi doonaa markii dabku ka baxayo - New York Times - TELES RELAY
ACCUEIL » kale » Selon Macron, Notre-Dame sera reconstruite au fur et à mesure de l'extinction du feu – New York Times
Sida laga soo xigtay Macron, Notre-Dame ayaa dib loo dhisi doonaa markii dabku ka baxayo - New York Times
PARIS - Dabka ayaa burburiyey Notre Dame ayaa bakhtiyeen, saraakiil ayaa sheegay, ka dib markii Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa balan qaaday dib u dhiska Cathedral ah, calaamad ah ee magaalada muddo ka badan siddeed qarniyo, iyo xeer-furay baaritaan Maxaa sababay dabka in si xun u burburay jawharad dunida caanka ah ee naqshadaha Gothic.
Dhowr saacadood ka dib markii ceelka dhaadheer iyo daboolka weyn ee saqafka ah uu burburay Isniintii oo ku dhex jiray olol iyo qiiq, Mr. Macron wuxuu hor istaagay dhismaha wali gubanaya. waxaana uu sheegay in dadaalka caalamiga ah ee loogu talagalay in la soo ururiyo lacag loogu talagalay dib-u-dhiska ayaa bilaabi doona Talaadada
"Waxaan dib u dhisi doonaa Our Lady," ayuu yiri. "Taasi waa waxa Faransiisku sugayaan."
Bilyaneerka reer France ee Pinault balan qaaday 100 million euros taas oo ku saabsan 113 malaayiin doolarka Mareykanka, Agence-France Presse ayaa sheegay, iyo sidoo kale qoyska Bernard Arnault, milkiilaha kooxda alaabooyinka raaxada LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, qorshayaasha ah in ay ka qaybqaataan 200 million euros .
Qalabka dab-damiska dab-damiska ee Isniintii ayaa kiciyay 18h20, waxaana jeegagga la qaaday, laakiin xeer-ilaaliyaha Paris Remy Heitz ayaa sheegay in dab la qabtey aan la ogaanin. Qalab kale oo labaad ayaa lagu dhawaaqay 18h43, ayuu yidhi, oo dab ayaa laga helay shandada alwaax ee qiiqa.
"Muddadaa, kaniisadda ayaa laga daadgureeyay sababtoo ah Kooxdu waxay bilowday wax yar ka hor," ayuu yiri.
Mr. Heitz ayaa sheegay in baarayaasha 50 ay ka shaqeynayeen inay go'aamiyaan sababta keentay dabka, wareysiga shaqaalaha iyo markhaatiyaal kale, laakiin "baaritaanka ayaa noqon doona mid dheer oo adag." Ilaa hadda, dabku wuxuu u muuqdaa inuu ahaa shil, ayuu yidhi.
Laba askari oo bilays ah iyo dab-gubiye ayaa la dhaawacay, lakiin qofna lama dilin.
Gabriel Plus, oo ah afhayeenka dab-demiska Paris, ayaa sheegay subaxnimadii Talaadada in dabku uu bakhtiiyay, laakiin dab-demiyayaashu waxay wali raadinayaan "dab-bakhti ah" oo loo baahan yahay in la bakhtiiyo.
Intaas waxaa sii dheer, oo la hadlaya saxafiyiinta meel u dhow Notre-Dame, khubarada ayaa hadda eegaya dhismaha dhismaha si loo arko sida daciifka ah.
Our Lady ayaa la dhisay qarnigii laba iyo tobnaad ee aasaasiga ah ee aasaaskii kaniisaddii hore. iyo Roomaankii oo ku yaala jasiiradda Seine, ayaa waxaa soo booqday qiyaastii 13 dadka sannadkiiba. Dhismaha dhismayaasha ku xeeran, waxaa si dhakhso ah u aqoonsan dadka aduunka oo dhan, maaha oo kaliya xarun diineed, laakiin sidoo kale astaanta qaranka, dhaqanka iyo taariikhda Faransiiska.
Afhayeenka Vatican, Alessandro Gisotti, ayaa ku qoray boggiisa Twitter-ka in Pope Francis uu ku tukanayay "dhammaan kuwa isku dayaya in ay la qabsadaan xaaladdan naxdinta leh."
PSG iyo martida la yaabay iyo dadka xad-dhaaf ah oo dunida ku nool daawashada telefishanka, daawaday sida Cathedral ee ay duulaya caanka ah ee naxdin buttresses dhisay si ay u taageeraan derbiyada yara dhuuban oo dushooda uu waqti, gubay dhawr maalmood ka hor xafladaha ee Easter Sunday.
[Alorsqu'unmonumentfrançaissebrûlaitlesymbolismeétaitdurpourlepaystroublé naqshadayada qoraalka naqshadeynta .]
Boqolaal dad ah ayaa isugu soo ururay Notre Dame subaxnimadii talaadada, dad badan oo isku dayay inay fahmaan wixii dhacay.
"Waan faraxsanaa markii aan u baxayay dabkii habeenkii hore, wali waxaan naxay aroortan," ayuu yiri Serge Roger, oo ah hawlwadeen reer Paris ah oo 67 ah. Waxa uu daawaday dab-bakhtiiyeyaasha biyaha ku dul dhejinayay cathedral, qaar ka mid ah oo soo galaya oo ka tegaya dhismaha sigaarka, kuwa kale oo ka boodaya Seine.
Inkastoo ilkuhu bilaabeen inay buuxiyaan indhaha Mr Roger, Pascale Defranqui, sanado 59, ayaa siisay dambaseed inay soo ururisay meel u dhow kaniisadda habeenkii ka hor. Sida Mr Roger, waxay sheegtay in ay dhibaato ka haysato hurdada. Waxay booqatay xarunta kaniisadda subaxnimadii Talaadada, ayay tiri, si ay u bixiso abaalmarinta "gabadha ugu quruxda badan ee Paris weli taagan."
"Parisians waa inaan ka hadalnaa wixii ku dhacay Notre Dame, sababtoo ah waan jeclahay, waan ognahay, waa qayb ka mid ah nolosheena maalinlaha ah," ayuu yiri Ms. Defranqui. Waxay baratay naqshadda dhismaha cathedral fasalada taariikhda farshaxanka ee Louvre, oo waxay la yaabi doontaa xirfadaheeda iyada oo ka soo laabtay matxafka iyada oo gurigeeda ku taal ounle Saint-Louis, jasiiradda deriska ah Jasiiradda Magaalada, halkaas oo Notre-Dame ay tahay.
"Ma hubo inaan rabo in aan ogaado waxa dhacay," ayuu yiri Ms. Defranqui. "Waxaan rabaa in dib loo cusboonaysiiyo sida ugu dhakhsaha badan."
Raktarka of katedraalka, elin. Patrick Chauvet, ayaa sheegay in dabka u muuqday inuu ka bilowday network alwaaxdii saqafka haysay alwaax culus, kuwaas oo qaar badan taariikhda ka qarniyadii dhexe oo loogu magac daray "kaynta", oo ku yaalla kor ku saqafka dhagax vaulted gudaha iyo ka yar saqafka.
"Marka aan joogno koofurta, waxaan haynaa kormeerayaasha xagjirka ah," ayuu yiri Bishop Chauvet Talaadadii oo jooga France raadiyaha. "Saddex jeer maalintii, waxay ku fuulaan saqafka qoryaha si ay u sameeyaan qiimeyn."
Waxa uu sheegay in sidoo kale uu ahaa dab-demiyeeye goobta goobta cathedral, inkasta oo uusan sheegin inta jeer ee, halkee qofkaasi. caadi ahaan shaqada ama haddii qofkaas uu joogey shalay.
"Nabadgelyada, uma maleynayo in aan wax badan qaban karno," ayuu yiri. "Laakiin waxaa jira had iyo jeer dhacdo aanad saadaalin karin."
Marka laga soo tago dhismaha laftiisa, dabku wuxuu khatar ku yahay haraaga iyo daaqadaha muraayadaha leh dariishado ay wadajir u sameeyaan sunta rasaasta heerkulkiisa sare. . Inkasta oo khasnaji, qarsoon ee taajkii qodxaha lahaa in la soo xiray by Ciise inta lagu guda jiray iskutallaabtiisa, ayaa la badbaadiyey, xaaladda alaabta taariikheed ee kale lama caddeynayo .
[Theblaze  ayaa ku hanjabtay ururinta xajmiga ah oo ah farshaxan masiixiyiin ah oo ku yaala kiniisadda.]
Naqshadeeyaha wuxuu kormeerayay shaqada kaniisadda ee sanadaha 1980 iyo 1990 wuxuu sheegay in uu aaminsan yahay in dhismaha iyo alaabtiisa la badbaadin karo. Sawirada gudaha ka muuqda ayaa muujiyay in qalab badan oo guban kara, sida kursiyada iyo minbarafka, ay ahaayeen kuwo isdaba joog ah.
"Tuubka dhagaxu wuxuu u shaqeeyaa sida dabka oo wuxuu ka hortagayaa kuleylka ka baxsan," ayuu yiri dhismaha Bernard Fonquernie.
Laakiin saqafka, oo ah qaab weyn oo alwaax ah oo daboolan oo leh daboolka rasaasta, ayaa u muuqday in si aad ah loo lumay, ayuu yidhi. Tijaabooyinkii hore ee saqafka ayaa muujiyay in qaabka ugu badan ee dhismaha loo sameeyay ka mid ah geedaha iyo geedaha jilicsan ee isku dhafay by aasaasayaasha asalka ah, ayaa sheegay in Fonquernie.
Waxay ahayd muddo dheer, sababtoo ah saqafku si joogto ah ayuu u dayactiray oo aan biyuhu jirin. Laakiin taasi waxay ka dhigan tahay in qoryaha uu aad u engegay oo si fudud u gubi karo, ayuu yidhi.
[Halkan waxa aynu ognahay oo aynaan ogeyn on dabka.]
Laba sano ka hor, afhayeen u ah kaniisadda ayaa sheegay in ay u baahan tahay isbedel weyn oo ku kici doona ku dhowaad 180 million. Qayb wayn oo ka mid ah facebooska cawska ayaa la burburiyay, iyada oo la jarjaray dabayl iyo roob, ayuu yiri afhayeenka André Finot.
Isniintii, cathedral waxaa lagu daboolay shaqooyin iskubeddel ah oo dib u hagaajin ah. dabka qaawan ama duufaanka qalabka
"Haatan waa ay baxday, malaha sabab la'aan," ayuu yiri Fonquernie. "Iyadoo la shaqeyneysa kuleylka, sida ay sameeyeen, ee ku xiga qoryaha qoryaha badan ee qoryaha ah waxay u baahan yihiin xannaano culus."
Cameroon: Dab damiska Isniinta wafdiga wafdiga ee shaqooyinka dadweynaha ee xarunta.
Maya, Xvideos ama Xnxx waxay ku dhici doontaa geedka kasta 1 000.